Filoha tao amin’ny France 24 : « Misokatra amin’ny rehetra i Madagasikara » -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha tao amin’ny France 24 : « Misokatra amin’ny rehetra i Madagasikara »
30/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Filoham-pirenena afrikana fahatelo noraisin’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ny filoha Malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Fivahinianana tamin’ny fomba ofisialy izay tsy navelan’ireo haino aman-jery frantsay handalo fotsiny. Mpanao gazety Frantsay maromaro no afaka nitafa tamin’ny filoham-pirenena Malagasy, taorian’ny fihaonan’ny filoha roa tonta, ka anisan’izany ny Radio France International (RFI) sy ny fahitalavitra France 24. Nomarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa fiarahabana ny Filoha frantsay sy fametrahana indray ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta no anton’ny fitsidihana. « Fifandraisana efa ela ary efa mafy orina », ny ny filoha Malagasy raha nanamarika fa ny firenena sinoa no mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara amin’izao fotoana. « Ho fanarenana ny firenena, mila vahaolana maro avy etsy sy eroa i Madagasikara. Toy ny firenen-dehibe toa an’i Etazonia dia manokatra ny varavarany ho an’ny mpandraharaha aziatika. Ka maninona moa i Madagasikara no tsy afaka hisitraka izany ?», hoy izy raha nanazava ny fifandraisana misy amin’ny firenen-kafa manoloana ny fifandraisana amin’i Frantsa. Nomarihiny fa mpiara-miombon’antoka voalohany i Frantsa ary mitohy hatrany ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin’ity firenena ity ary porofon’izany ny fisian’ireo orinasa frantsay goavana eto Madagasikara ary notanisainy tamin’izany ny Bouygues, Colas, Aéroport de Paris… Nivoitra tamin’ny fihaonan’ny filoha roa tonta ny hampivoarana izany fifandraisana izany. « Efa eo ireo lalana mahazatra toy ny Afd, fa ny tena ampirisihina dia ireo mpandraharaha tsy miankina frantsay ho tonga any Madagasikara izay misokatra ho an’ny rehetra », hoy ihany ny filoha.
Mikasika ny zava-misy eto amin’ny firenena amin’ny ankapobeny, dia nanamarika ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsara ny mijery ny toerana nisy an’i Madagasikara teo aloha sy izao lalana ho diaviny izao. Nampahatsiahivina fa mpitondra fanjakana 13 no nifandimby nitondra an’i Madagasikara tao anatin’ny 57 taona ka ny 6 tamin’ireo ihany no voafidim-bahoaka. « Ezaka lehibe io. Tsy maintsy atao ny ady amin’ny kolikoly eo amin’ny sehatra rehetra, nefa ihany koe entina amin’ny fanabeazana », hoy indray izy raha niresaka ny kolikoly eto Madagasikara. Tranga izay nomarihiny ihany koa avy amin’ny fahantrana. « Anisan’ny mampisy ny kolikoly ny fahantrana ka zay no mahatonga ny ezaka amin’ny fampivoarana ny toekarena sy hijerena ny lafiny sosialin’ny mponina.»
Nanontanian’ny mpanao gazety frantsay ihany koa ny mahakasika ireo Nosy manodidina na ny Iles Eparse izay mbola tantanin’i Frantsa nefa efa nambaran’ny firenena mikambana fa an’i Madagasikara tany amin’ny taona 1979 sy 1980. « Heveriko fa tokony hojerena kokoa ny lafiny lalàna. Adihevitra eo amin’ny manam-pahaizana manokana sy ny mpahay lalàna io. Marina fa raha mijery ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana dia an’i Madagasikara ireo Nosy ireo. Tsy voatery hitovy amin’izany ny hevitr’i Frantsa. Eo no tokony hipetraka ny ady hevitra mifanaraka amin’izany », hoy ny fanamarihany.
Mikasika ireo fakana an-keriny tera-tany karàna mizaka ny zom-pirenena frantsay kosa dia nanamarika ny Filoha fa efa nahitam-bokany ireo fepetra isan-karazany noraisina tao anatin’ny roa herinandro ary efa manomboka sarona ny tambazotra mpanao izany
Nivoaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ho an’ ireo parlemanta roa tonta dia ny solombavambahoaka sy ny loholona izany, izay hanomboka ny alatsinainy faha-26 ny volana febroary ho avy ...Tohiny